Marqaan News Agency » DEG DEG:Puntland,Jubbaland Iyo galmudug maxay Ka Dhaheen Doorashada Gudoomiye jawaari..
DEG DEG:Puntland,Jubbaland Iyo galmudug maxay Ka Dhaheen Doorashada Gudoomiye jawaari..
Jan 11, 2017 - 4 Jawaabood
4 Responses to DEG DEG:Puntland,Jubbaland Iyo galmudug maxay Ka Dhaheen Doorashada Gudoomiye jawaari..
Puntland iyo Jubbaland la mid ma aha Galmudug iyo maamul goboleedyada kale. Waa geyiyo waa weyn ee la fac ah geyiga Soamliland. Waa geyiyo jooqraafi ahaan u dhigma baro ganacsiga caalamka u leh straatijiyad gaar ah. Madaxda Puntland iyo Jubbaland waxaa looga fadhiyay garashada ah in aanay labadani geyi la fil ahayn maamul goboleedyadan kale ee baaxaad ahaan ka sii yar straatijiyad ahaanna aan la heer ahayn. Madaxdani maangaabnimadoodu waa mid runtii fajac kugu ridaysa. Bal ila gorfeeya.
Jubbaland waxaa ay ku taallaa goobta East Africa oo dhan ugu straatijisan ee Badweynta Hindiya. Waxaa suuqyada dhaqaale ee caalamka lagu hadal hayaa qiimaha aan la qiyaasi karin ee ay ganacsiga dunida ku leedahay inta u dhaxaysa Kismaanyo iyo Lamu oo Kenya ah. Kenya ayaa olole xooggan ugu jirta sidii ay bartan dahabiga ah iyadu iskugu goosan lahayd iyada oo ay dabada ka riixayaan shirkado Israa’iil, UK iyo Mareykan ah oo u dhimanaya in ay gacanta ku dhigaan. Waa sababta ay dawladda Kenya ahamiyaddeedii oo dhan u saarayso Lamu iyo Raas Kaambooni nawaaxigeeda.
Kenya waxa ay balaayiin doolar ku maalgashanaysaa Lamu oo ay dekadaha East Africa ugu waa weyn damacsan tahay in ay ka dhisato si ay suuqaas ula wareegto, laakiin Lamu waa ay ku yaraatay. Fursadda oogu dahabsan waxaa haysata Jubbaland ee ka xeeb dheer inta Kenya haysato. Madaxda Jubbaland halka ay isku mashquulinayaan been beenta Xamar laga wado waxaa ay ahayd in ay ku hawllan yihiin xidhiidhyo ganacsi ee ay la yeelanayaan shirkadaha muslimiinta ee dalalka UAE, Sacuudiga, Malaysia iyo Indonesia ee ku xeeldheer maareynta dekadaha iyo ganacsiyada ku xeeran. Kuwaasaa maalgashi xoog leh Jubbaland iyo Puntland ba ka sameysan lahaa oo dekado iyo eeraboodho casri ah u dhisi lahaa. Jubbaland iyo Puntland wax ay Xamar ooga baahan yihiin ma jirto oo iyaga ayaaba dalka oo dhan biili kari lahaa. Caku!
Somalia dhulka ugu liita oomanaha ah
Ayaa jabartiga ilaahay kubeeray jubaland kenya haduu baxo kahari maysid faan looma baahna Malaha qurbaha ayaad kudhalatay bal soo eeg